crash ... မ foo-foo ကျေးဇူးပြုပြီး | Martech Zone
crash ... မ foo-foo ကျေးဇူးပြုပြီး
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 10, 2006 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 10, 2006 Douglas Karr
မနေ့ကငါအိမ်ပြန်လာ။ ထွက် zonked ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ငါပျက်သွားပြီ များစွာသောလူလိုပဲငါဟာအကျင့်ဓလေ့တစ်ခုပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာအလုံအလောက်သော်လည်း, ငါ့အလေ့အထသော်လည်းအပတ်စဉ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏စနေ၊ တနင်္ဂနွေများသည်အများအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုထုပ်ပိုးထားကြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ရက်သတ္တပတ်ကမည်သည့်အကျင့်ကိုမဆိုပြုလုပ်တတ်သည်။ တနင်္လာနေ့တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်နောက်ကျပါကအများအားဖြင့်တစ်ပတ်လုံးနောက်ကျလေ့ရှိသည်။ ငါတနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်လျှင် ... ငါတပတ်လုံးနှောင်းပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဤသည်နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေငါတစ်ခုလုံးကိုတနင်္ဂနွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အလုပ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ငါကတစ်ချိန်တည်းမှာစီမံကိန်း ၆ ခုထက်မကရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ဟန်ချက်ညီစေတဲ့လုပ်ရပ်ကပျော်စရာကောင်းပေမယ့်ငါဟာပိုပိုပြီးလုပ်တတ်လာတယ်။ မနေ့ညကငါနှင့်အတူအမီလိုက်နှင့်ငါ napped ။ ဒီညငါပျက်သွားပြီ ငါထွက် pooped တယ် ငါ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကျင့်ဆိုးများကိုငါအစပြုခဲ့ပြီ အခုအလုပ်ကအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါချက်ချင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါညတိုင်းအိပ်ပျော်နေလိမ့်မယ်။ Argh ။
တောက်ပတဲ့ဘက်ခြမ်းမှာတော့ဆိုလိုတာကငါဟာ ၀ ယ်လိုအားရနေတယ်၊ အပျက်သဘောဆောင်သောဘက်တွင်, ငါသည်ငါ့အလုပ်အပေါ်အခြေချလိုကြဘူး။ ငါပြီးပြည့်စုံသောပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ပေးအပ်ခြင်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နားလည်မှုရှိသည်။ ငါပြီးပြည့်စုံတဲ့ကိုကြိုက်တယ် မုန်းတယ် ရုံ ငါ၏အဖောက်သည်ခြားနားချက်ကိုသိဘယ်တော့မှသော်လည်း ... ပို့။ မကြာခဏပေးပို့ခြင်းဆိုသည်မှာလများစွာကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ပိုရှိပါကဖြန့်ဝေရာတွင်ကျွန်ုပ်ပြီးပြည့်စုံနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသောအရာတစ်ခုခုကို 'redoing' လုပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ဤကဲ့သို့သောအရာမကြာခဏဖြစ်သည်၊ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်သည်သေဒဏ်ပေးခြင်းကိုတောင်းခံပြီးစုံလင်ခြင်းကိုထုတ်ပစ်လေ့ရှိသည်။ ပြက္ခဒိန်သည်ရလဒ်များထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်သည်မှာပြည့်စုံစွာဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များသည်အင်္ဂါရပ်များ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ဗေဒဗေဒများကိုနောက်မှမဟုတ်ဘဲသူတို့လက်ထဲတွင်အမြန်ဆုံးရရန်အင်္ဂါရပ်များ၊ ဒါကအမေရိကန်အပြစ်အနာအဆာလား Rush, Rush, Rush … crash? ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအားနည်းချက်လား။
ငါ 'creep' 'ဆော်သြမဟုတ်ပါဘူး။ Creep သည်ပြီးစီးခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်သည်စီမံကိန်းကိုသင်ဘယ်တော့မျှမပြီးမြောက်နိုင်မှီတိုင်အောင် 'တွားသွား' နေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ငါ 'တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်' ကိုမထီမဲ့မြင်မပြု။ တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မရှိလျှင်ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံးဝပြီးပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည့်အချိန်မရှိပုံရသည်။
South Bend ချောကလက်စက်ရုံမှာကော်ဖီသောက်လိုက်တယ် foo-foo မရှိပါချောကလက်ဇွန်း၊ ချည်နှောင်ခြင်းမုန့်၊ ချယ်ရီသီး၊ ဖုန်မှုန့်မဖျန်းခြင်း၊ အခြားပစ္စည်းတွေကိုစောင့်နေစရာမလိုဘဲကျွန်တော့်ကော်ဖီကို foo-foo မရှိဘူး။
မှတ်စု: သင်တစ်ခါမှမဖူးဘူးဆိုရင် တောင်ကွေးချောကလက်စက်ရုံသင်သည်ကြီးစွာသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကောင်းမွန်သောနေရာတွင်ပျောက်နေသည်။ သူတို့မှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေရှိတယ်။ ပထမဆုံး Mocha ကောင်းကောင်းရပြီဆိုရင် foo-foo ရဖို့သေချာပါစေ။ ကောင်းတဲ့အားရစရာပဲ
နောက်ကျောငါ့အမှတ် ... ကုမ္ပဏီများကကြိုက်တယ် Google, Flickr ကို, 37 အချက်ပြ နှင့်အခြားခေတ်သစ်အောင်မြင်မှုများက 'foo foo' ကိုပစ်ချသည်။ ဤသူများသည် foo foo မရှိသည့်ကြီးကျယ်သော software ကိုတည်ဆောက်ကြသည်။ သူတို့ကအလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်တဲ့ application တွေကိုတည်ဆောက်တယ်၊ အဲဒါထက်ပိုပြီးမလုပ်နိုင်တာကိုအတော်အတန်စိတ်မချရဘူး။ အဆင်ပြေတယ်။ ကောင်းပါတယ် အချို့က ၄ င်းသည် foo-foo ကင်းမဲ့သောကြောင့်၎င်းသည် 'ပြည့်စုံခြင်းမရှိ' ဟုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ အောင်မြင်မှုနှင့်ကလေးမွေးစားခြင်းနှုန်းများခြင်းကလူအများစုအတွက်မူ၎င်းသည်မမှန်ကြောင်းပြောကြားသည်။ ပြjustနာကိုဖြေရှင်းပေးပါ။ ငါ့အလုပ်မှာငါတို့ foo-foo ပေါ်မှာအချိန်အများကြီးကုန်နေတာကိုသတိထားမိတယ်။
မင်းမှာ foo foo မပါတာနဲ့လား။
Foo-fooဒါကိုဘာကိုခေါ်မလဲ။ ဘယ်လိုကြည့်မလဲ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းနိုင်သောရွေးချယ်စရာများအားလုံးကဘာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်များဘာလုပ်နေလဲ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကဘာကိုလိုချင်တာလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာပြီးပြီလဲ?
foo-foo မရှိပါ ဘာလုပ်မလို့လဲ ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ အသုံးပြုသူက၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်မည်လား။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများသည်ဘာလိုအပ်ပါသလဲ။ ဒါကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ?
သကြား Plum ၏ Mosh
စာမူတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်စာရင်းကိုမသုံးရသည့်အကြောင်းရင်း ၅ ချက်။
16:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 07
Foo-foo, foo-foo... ကော်ဖီနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ software နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒါက ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကို ဆုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းပါပဲ။ ကော်ဖီသောက်ခြင်းဖြင့် ဖူ-ဖိုတွင် ကော်ဖီသောက်ခြင်းမဟုတ်သည့် အပြင်ထွက်ပစ္စည်းအားလုံးသည် ရိုးရှင်းပုံပေါက်သည်။ foo-foo ကို စွန့်ပစ်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ နမူနာများမှ၊ web 2.0 အားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် အနည်းဆုံး အသုံးပြုသူ ရှုထောင့်မှ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် လှပမှု နှစ်မျိုးလုံးမှ 'ရိုးရှင်း' ပေါ်တွင် အခြေခံပုံရသည်။ ငါနည်းနည်းရှုပ်သွားတဲ့အချိန်က မင်း foo-foo နဲ့ no foo-foo မေးခွန်းတွေကို မင်းမေးတဲ့နေရာလို့ ငါထင်တယ်၊ ဒီမေးခွန်းတွေထဲက တချို့က foo-foo ထွက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် catagory နှစ်ခုစလုံးမှာ မပါဘူးလားဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး။
ငါတို့က အဲဒါကို ဘာခေါ်မလဲ။ ကောင်းပြီ၊ google၊ flickr နှင့် အချက်ပြမှု ၃၇ ခုဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏အမည်များသည် အတော်လေးကို ဖမ်းစားပြီး အရေးကြီးပုံပေါ်ပြီး ၎င်းတို့နှင့် အချိန်အနည်းငယ်ကြာသွားသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲ။ ရိုးရှင်းသော၊ သန့်ရှင်းသော၊ web 37… ထိုကုမ္ပဏီများအတွက် အတွေးတစ်ခု ထပ်ဝင်လာပြန်သည်၊ ရွေးချယ်စရာများ… foo-foo လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်များ ဘာလုပ်နေကြသနည်း၊ အရေးကြီးသေးသည်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုရန်၊ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ၎င်းတို့လုပ်နေသမျှကို မလုပ်ရန် အရေးကြီးနေသေးသည်။ ဖောက်သည်တွေ လိုချင်တာက အရေးကြီးတယ်… ဖောက်သည်တွေက သူတို့ လိုချင်တဲ့ အရာက အရေးမကြီးဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာ ပြီးအောင်လုပ်ရမလဲ၊ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်နယ်ပယ်မှာ အရေးကြီးပါသေးတယ်။
ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ ဒီမှာ ဖို-ဖူ မရှိဘူးထင်တယ်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးက ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် မည်သို့မျှော်လင့်မည်နည်း။ ငါ့အတွက်တော့ ဒါက foo ဒါမှမဟုတ် non-foo ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများသည် အဘယ်အရာလိုအပ်သနည်း။ ငါဒီမှာမဟုတ်တဲ့ foo ထင်ပါတယ်။ ပြီးဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ဒါဆို ဒုတိယမေးခွန်းက ငါ့အတွက် လုံးဝကို မတည့်ပုံပဲ။ ပထမ အစုံက နည်းနည်းတော့ ရှုပ်သွားတယ်။
ငါ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းက 'ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ။'
16:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 10
မင်းက ငါ့အမှတ်နဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတယ်။ မေးခွန်းများသည် အလွန်ဆင်တူသော်လည်း၊ ၎င်းတို့အားလုံး သင်မေးသောမေးခွန်းကို အတိအကျ ကွဲကွဲပြားပြား သိနိုင်သည်... 'ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ။'
ကျွန်တော့်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ခရစ် Baggott“ဘယ်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းမလဲ” လို့ မေးတာကို ဘယ်သူက ကြိုက်လဲ။ အက်ပ်၏အမည်၊ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်၊ ရွေးချယ်မှုများ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ လိုချင်မှုများ၊ အချိန်ကိုက်… အားလုံးကို ဆော့ဖ်ဝဲလောကတွင် အာရုံစိုက်ထားသော်လည်း ၎င်းကို ဘယ်သောအခါမှ မမေးခဲ့… “ဘာပြဿနာကို ဖြေရှင်းမလဲ”
မှားနေတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ အချိန်အများကြီးဖြုန်းတာထက် မှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် အချိန်ဖြုန်းသင့်တယ်။